Landa ii-utm zendawo zeGoogle Earth - Geofumadas
Matshi, 2016 Google umhlaba / imephu
Le fayile iqukethe indawo ye-UTM kwifomati ye-kmz. Emva kokukhutshelwa kufuneka uyivule.
Khuphela ifayile apha
Kuphela nje reference ... zivela uququzelelo obume ukusuka umhlaba ngezigaba njengoko uya kwenza njalo ngaso i-apile, yenza nkqo imisiko esiqu (ebizwa ngokuba ubude) kunye amanxeba nkqo wenze ngaxeshanye (ebizwa ngokuba ezinezinga).
Kwimeko ubude, ezi baqale adweliswe ukusuka cwaka Greenwich esibizwa ngokuba zero amaza ukuya ngasempuma, zidweliswe ukuya degrees 180, apho ithe cwaka efanayo okuphosela ulutya (ekuthiwa antemeridiano), le isiqingatha kuthiwa " Oku. " Emva koko enye isiqingatha kuthiwa West, ngokubanzi elimelwe W (entshona), njengoko esiqu Greenwich isiqalo icala ukusuka degrees kwiqanda ukuya 180.
Le ndlela yokuqulunqa izilungelelwano ezingenanto yokwenza ukuphakama kwinqanaba elwandle, kuba i vector eqala ukusuka kumbindi womhlaba ukuya phezulu, oku kukubonakaliswa kweGoogle Earth, kwaye yile ndlela iinqununu ezisetyenziselwa iifayile ze-kml, ukongezelela i-spheroid yesalathisi yongezwa yindlela yokujonga ubungakanani bomhlaba ngenjongo yokulinganisa. I-Google isebenzisa i-WGS84 njenge-spheroid yesithenjwa (nangona kukho izixhobo ezivumela u-UTM ukulungelelaniswa ukungena kwi-Google Earth). Inzuzo enkulu kunale yolu hlobo kukuba ulungelelaniso luyingqayizivele kumhlaba, nangona ukuphathwa kwemisebenzi yokubala ubude okanye iikhombandlela akusebenzi "kubantu abangaboniyo-geographer".
Izikhokelo ze-UTM zisekelwe kwingcamango yokuqwalasela i-spheroid yereferensi ukusuka kwi-Traverso de Mercator. Umhlaba uhlala uhlulwe ngama-meridians, kwicandelo lee-degrees ezintandathu ezenza inani le-60, ezi zibizwa ngokuba ziindawo. Ukubalwa kwale mimandla kuqala kwi-antemeridian, ukusuka kwi-zero ukuya kwi-60 ukusuka entshona ukuya empuma.
Ezi ziqwempu eyakha parallel ukusuka 84 S ukuya 80 N, kwaye zidweliswe kunye iileta ukusuka ku C ukuya X (i "Mna" ngaphandle kwaye i "O"), icandelo ngamnye 8 degrees lokuphakama , ngaphandle kwe-X ene-12 degrees.
Ukulingana kwereferensi ye-spheroid kwinqanaba lolwandle, kwenza i-arc ukuba le fom ifom efana nemeko efana neyoqobo yendawo. Le ncwadana ye-spheroid, ngaphambili (epapashwa kwiLatin America) yayiyi-NAD27, okwangoku i-NAD83 isetyenziswa kakhulu, yaziwa ngabantu abaninzi njenge-WGS84. Ukuba nesalathisi esingafaniyo, i-grids zombini i-spheroids iyahluke.
Ngoko ummandla unxibelelwano x, kwaye uqala, kummandla weMntla Merika, umda phakathi kweendawo 15 kunye ne-16 inomlinganiselo olinganayo we-178,000 kwaye ifinyelela kwi-820,000 ngaphezulu okanye ngaphantsi. Uluhlu lolungelelaniso lufana nendawo nganye, kwindawo efana noluhlu kodwa siyacacisa, akusiyo igridi yamathambo kodwa ngenjongo yokulinganisa kwendawo, iyafana. Imida phakathi kwemimandla iyavalwa, kodwa yonke inxalenye ye-axis ephakathi, apho i-meridiya ebonakalayo eyiyo ngokupheleleyo ubude bayo yi-300,000 eyaziwa ngokuba yi "le nkohliso", ngenjongo yokuba zombini nakwesokunene kwalo meridiya akukho ziyunithi ezimbi
Iimephu esaziyo ngeenjongo ze-cadastral, ngezikali 1: 10,000 okanye i-1: I-1,000 ivela kwiqendu lo mmandla, kwisithuba esilandelayo siza kuchaza indlela oku kwahlukana ngayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Umzekelo Domain of Management Land - Case Colombia
Post Next I-Blockchain ne-Bitcoin isetyenziswe kuLawulo lweMhlabaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-8 "Ukulanda indawo ye-Google Earth"
Akunakwenzeka Ukulungelelaniswa kwe-utm kunokuphindaphinda ubuncinane kabini kwi-x ne-y kwiindawo ze-60
Ngaba ikhona indlela yokubala isiporho sibe namalungiselelo e-UTM?
Sithandwa sam, ndihlala eNicaragua. Sitya ezinye iimvana zaseSalvador eAltamira kwaye ndiyakucacisela.
Kudala ndifunda izihloko kwibhlog yakho ye4 iminyaka ethile ngoku. Inyani yile yokuba ndikhuphele imimandla ye-UTM eGEarth. Ndinayo igridi yeemephu zedrafikhi yeNicaragua (la maphepha athi "umlinganiso" 10 ′ wobubanzi x 15 ′ yobude. Ingcinga kukuzithatha ukuya eGEarth ngendlela efanayo nakwiindawo ze-UTM. Andilobuchule nge AutoCAD kodwa into nge Excel. Ndizamile ukuyisombulula ngoluhlobo: Kwi-Excel ndinamakhonkco okudibanisa amaqhosha ephepha ngalinye (kucacile ukuba aliphindwanga kumaphepha aselumelwaneni), ndenza i-.txt kwaye ngeGeotrans ndayiguqula kwi-UTM WGS84 ndinombono wokuba ndibayise kwi-AutoCAD, bafudukele I-DXF kwaye ke kwi-.kml kodwa ingxaki yam kukukwazi kwam kwi-AutoCAD.Mhlawumbi ndithatha ithuba elihle, inyani kukuba andinakuze ndikwazi ukuzoba imigca okanye iipoligoni kwi-GEarth.ndiya kuba nombulelo ongazenzisiyo ukuba undibonise naluphi na upapasho lwebhlog yakho olunokundinceda. Enkosi kakhulu evela eManagua.
URicardo Roberto Ayala Jara uthi:
Ndonwabile kakhulu, kamva ndiza kufuna ezinye izifundo, ndibulele ngolwazi, i-byee
Uphosakele ukuba isicelo sesivela kwi-google emhlabeni
Sele ndilungisile ikhonkco. Bendingalunganga.
Akukho nto ikhutshwe. Ikhonkco ikhokelela kwenye inqaku. Geofumadas ????